Surly straggler ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ọnụ ego siri ike - azịza na ajụjụ
Ọnụ ego siri ike - azịza na ajụjụ
Surly straggler ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Na $ 1,775, ndịIhe ngbanweọnụ ọnụ ziri ezi, na ya egosipụta na-eme ka ọ aeziuru. Ibu ahụ ga-egbochi ụfọdụ, mana nke a bụ otu n'ime igwe kwụ otu ebe kachasị mma m gbalịrị ma ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ịnyagharị njem, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-aga ogologo ụzọ gaa ụlọ ahịa.Ọnwa Ise 20, 2015
Ọ bụ ezie na abụghị m ọkachamara n’ịgba ịnyịnya ígwè, mana n’ihi na igwe kwụ otu ebe a bụ nke m, aga m agbalịa ịnye gị ya. Fọdụ ndị enyi m na ndị na-ahụ maka ịntanetị jụrụ m ihe kpatara m ji si na Brompton gawa n'ụgbọala na-aga aga. Ọ bụ ezie na igwe kwụ otu ebe Brompton bara uru nke ukwuu ma dịkwa mfe ibugharị, ọ naghị adị m ka ịpịgharị ịgba ịnyịnya ígwè dị ka ụdị ndụ m, m wee si na Brompton gawa Surly Straggler.
Mgbe ndị mmadụ jụrụ m ihe kpatara m ji banye na Surly, amaghị m ihe kpatara ya. Ya mere, mgbe m na-achụ nta ma na-achọgharị maka ịnyịnya ígwè na-aga aga, m nwere mmasị na Surly ozugbo. N'ihi agba ya dị jụụ, ụdị igwe kwụ otu ebe a na-adị m mma.
Aha ahụ dịkwa mma, Candy Red Salmon. Nke a ka m chere na agba dị ezigbo mma. Ezubere Surgg Straggler maka ndị mmadụ hụrụ ịgagharị ụzọ na mpaghara dị iche iche na ọnọdụ ihu igwe.
Okwesiri maka njegharị nakwa maka ndị njem. (Dị ka a emeputa, Surly kere na multifunctional imewe otú ọ ga-eji maka adị kwa ụbọchị mkpa) M zụtara a iche iche. M na-ewu ya site na ọkọ ma chịkọta akụkụ site na akụkụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa 3 ruo 4 ruo mgbe ọ gwụchara ma ahọrọ m akụkụ niile ojii n'ihi na ọ na-amasị m oji ọtụtụ.
Dị ka a ga - asị na m na - eme otu mbipụta ojii, pink pink. ^ - ^ Akụkụ na-akpali akpali nke igwe kwụ otu ebe a bụ na anyị nwere ike ịhọrọ otu anyị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ ma bulie akụkụ niile nke masịrị anyị ma daba ya na mmefu ego anyị. Surly mere nke chromoly ihe Ọ dị fechaa, ike na-adịghị nchara nchara dị mfe dị ka aluminom na Hi iri nchara, otú ahụ ka m ga-amalite na etiti mbụ, na a size nke 50cm, nke bụ m elu (170cm), M na-ahọrọ Nitto dị ka riser mmanya na Odi Vans maka njikwa n'akụkụ site na Vans fan onwe ya.
Maka maka sadulu, ana m ahọrọ Brooks C17C maka Cambium. Ọ bụrụ na ọ bụghị C, sadulu ahụ na-adịkarị mbadamba. Cdị C a nwere ezigbo ntụsara ahụ ma dịkwa nro ịnọdụ ala.
Maka otu m na-ahọrọ Shimano Tiagra, ọsọ 10 × 2, maka wheets, ihe nke 650B na-ele anya karịa ma ọ dị ka igwe kwụ otu ugwu, enwere ike iji ya na ihu igwe dị ala. Ihe na - eme ya pụrụ iche nye m bụ oche ahụ na mmanya ahụ, ana m agba mbọ ịnwegharị igwe kwụ otu ebe a ka ọ dị ka fixieRiding Brompton na igwe kwụ n’ahịrị bụ nnukwu ihe dị iche. Idinggba ịnyịnya ígwè Brompton na ịgba ọsọ bụ nnukwu ọdịiche.
Maka m ọ bụ ihe na-atọ ụtọ karịa ịnyagharị igwe kwụ otu ebe. Ọ dabere na ụdị onye ọ bụla masịrị ya na ụdị ya. Ogologo ụkwụ ịnyịnya igwe foldable pere mpe dị ka 16 ma ọ bụ 27, mana na nnukwu igwe kwụ otu ebe ọ bụ 650-700mm.
Nya a mpịachi igwe kwụ otu ebe nwere obere wiil dị ka n'itinyekwu 1 Nzọụkwụ. Mana ọ bụrụ n’ịnwere igwe kwụ n’ahịrị, ịnwere ike ịnya gị 2 ruo 2 2. Ya mere, mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ, ọ nwere ike ịda mbà nke ukwuu n'ihi obere wiil.
Igwe kwụ otu ebe a na-adị ọfụma, mara mma ma kwụsie ike. Ọ dị ka ịgagharị. Nke ahụ dịkwa mma maka agbụrụ ahụ
Ngwurugwu Surly ọ ruru ego ahụ?
Surlyanaghị emeanyịnya igwemaka otutu mmadu nwere otutu uzo, dika Trek, Giant, ma obu Specialized. Yabụ ee, maka otu ụdị igwe kwụ otu ebe nke nwere ekele maka ogo ụlọ akwụkwọ ochie,Surly anyịnya igwedịuru ego ahụ.
Olee otú ọtụtụ ọsọ bụ a surly straggler?
Shimano drivetrain gwakọtara 46/34 cyclocross crankset na Tiagra na-agbanwe na azụ mech, CX70 n'ihu mech na 11-32 iriososocassette, ezigbo nhọrọ maka iji ụzọ ma ọ bụ ịgagharị agagharị.Mar 2 2014
Ego ole ka nsogbu ahụ surly?
O nwere ajọ mbunobi megide ụzọ ike na ụzọ ojiji, manaibu ibu-agbatakwesịrịwepụ anya gị ugbu a. ” Oh ee, na 11.9kg (karịa 26lb), igwe kwụ otu ebe zuru oke adịghị - mana nke ahụ abụghị isi.24 nke 2020bọchị 2020
Kedu ihe dị iche na etiti 700c na 650B?
700cwiil ndị ahụ na-ebu nnukwu oghere ma nwee nhọrọ nke ọtụtụ ịnyịnya na ịgba ịnyịnya.650Bwiil nwere obere dayameta rim ka a na-ejikọkarị ya na taya buru ibu karị maka ntinye agbakwunye na traction.Mar 25 2020
Ezuru igwe kwụ otu ebe
You nwere ike itinye diski brek na Surly Cross-Check?
diskiga-aka mma na apịtị na mmiri mmiri, mana belụsọgịmee atụmatụmeena otutu, rimbrekịga-adi mma. na-agbakwunyediski brekka aCrosscheck ga-emepụtara ịzụ ọhụrụ wiil na ihe dị oké ọnụ na ụdị shady mgbanwe na eku na ndụdụ.June 7. 2020bọchị 2020
Ndi surly bu ezigbo ahia?
Surlybụ ihe a ma ama ma amaikaa na-asọpụrụ n'etiti ndị na-agagharị ịnyịnya ígwè na gburugburu ụwa. E gosipụtawo ọrụ ha nke ọma site na narị otu narị narị ndị na-agba ịnyịnya igwe ogologo oge n'ime iri afọ abụọ gara aga.
Na-Surly anyịnya igwe ngwa ngwa?
Ọ bụ ụzọigwe kwụ otu ebe. Ọ bụ ụzọ na-agba ịnyịnya ụbọchị niileigwe kwụ otu ebe. Ọ bụghị onye na-agba ọsọ (n'agbanyeghị na ọ bụrụ na ịlele ihu ihe oyiyi ihe oyiyi, ị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ha n'ụzọ ahụ), mana ọ ka bara ụbangwa ngwa, ọ bụigwe kwụ otu ebemaka inyinya na inyinya na inya na inya.11.05.2015
Ndi surly na eme igwe igwe anwuru?
Straggler bu uzo eji eme njem igwekota /gravel igwe kwụ otu ebeọ kachasị n'ụlọ na pavụ mana dị njikere maka ọrụ nzọ ụkwụ mgbe akpọrọ ya.
Kedu nke bụ ngwa ngwa 650B ma ọ bụ 700c?
Ihe dị iche na dayameta n’etiti ha dị ezigbo mkpa. Irigo na650Bwheelset na-adị a bit mfe karịa otu ọrịrị ke otu gia na700Cwiilị. Ma700Cwheelet na-echeỌsọ ọsọna eji ire ụtọ na nkwụsị.07/19/2020
Bụ 27.5 dị ka 700c?
Dị nnọọ ka a700Cwheel bụotudayameta dị ka wiil 29 '(29er),650BEkekọrịta kpọmkwemoturim dayameta dị kaOgbe 27.5”.Ogbe 27.5”/650Brim nwere bead oche dayameta nke 584mm, na 29 ”/700Crim nwere bead oche dayameta nke 622mm.04.26.2018
Onye na-agagharị agagharị bụ igwe njegharị ma ọ bụ na-ama ụlọikwuu?
Ọ bụghị na teknụzụ a njegharị igwe kwụ otu ebe ma ọ nwere ihe niile braze-ons na clearances maka racks otú mmadụ pụrụ ịkpọ ya a maa ụlọikwuu igwe kwụ otu ebe. Ọ bụkwa nnukwu igwe kwụ otu ebe maka naanị na-agagharị n'ugwu na otu ụzọ ma ọ bụ ụzọ gravel. Ọ na-eme m ka m chọọ ịga maka ịnyịnya na nke ahụ enweghị ike ịdị njọ.
Kedu ọnụahịa nke onye na-atụgharị ngwa ngwa nke 2020?
2020Surly Ihe ngbanwe. ogo. Nyocha 5 | Dee nyocha. $ 1,150.00. Ahịa:Surly. Ngwaahịa: 2020Surly. Nnweta: Na Ngwaahịa. Gini bu ihe aIhe ngbanweagbanyeghị? Azịza dị mfe bụ ikwu nke ahụSurlyagbakwunye diski brek na Cross-Check na nke a dị nso na ezi.
Kedu mgbe nnyogharị mgbapụta siri pụta?
Ọ nwere ụdị igwe kwụ otu ebe dị iche iche nke gunyere njem, ugwu na e-igwe. E mere ụdị mbụ nke Surly Straggler na 2013. Kwa afọ kemgbe ahụ, ha na-ahapụ nkwalite nke igwe kwụ otu ebe. Tinyere Surly Cross-Check, Straggler bụ otu n'ime igwe kwụ otu ebe kachasị mma nke Surly. Latestdị kachasị ọhụrụ nwere ụfọdụ nkọwa dị ịtụnanya.